ICanyon Casita, isipiliyoni sangempela saseWest Texas - I-Airbnb
ICanyon Casita, isipiliyoni sangempela saseWest Texas
1200 sq. ft. 2 Igumbi lokulala, Ibhavu elingu-1 Ukulala okungu-6
Uma ungena eminyango yesiphala, uzizwa sengathi usungene eNtshonalanga ye-adventure. Kunemidwebo eminingana nokuphrintiwe odongeni lwamaciko endawo kanye nezincwadi ezimbalwa zasentshonalanga ongazifunda. Woza uzothokozela ukukhangwa kwaseNtshonalanga endaweni yethu ebekwe esibayeni esiseceleni kwekhaya lethu.
I-Casita iwukwakhiwa okusha futhi igcwele izinsiza zesimanje.
-Central A/C nokushisa
-Ukufinyeleleka okuphelele kokukhubazeka (okuhlanganisa ne-roll in shower)
-Ukupaka endaweni yezimoto ezi-2
-Igumbi lokulala eliphakeme elinombhede wenkosi ongu-1 kanye nekhabethe
-Igumbi lokuhlala elinemibhede engu-4 nekhabethe
- Isipika se-Bluetooth
-I-TV ifakwe iziteshi zasendaweni kanye ne-Google TV
-Igceke langasese elinomgodi womlilo ongaphandle
-I-coffeemaker kanye ne-K-inkomishi
- I-cookware evamile kanye ne-bakeware
I-Dinnerware (yanele izivakashi eziyi-8)
-Izinongo eziyisisekelo kanye nama-condiments okudla
*Akufakiwe: Umshini wokuwasha izitsha
-Igumbi lokusebenzisa (i-washer / dryer)
-Umshini wokomisa izinwele
-Izinto zokugeza ezengeziwe namalineni
Igumbi lokuhlangana likhulu elinendawo yokuhlala, itafula lokudlela, nekhishi elinesiqhingi. Ihlotshiswe ngemihlobiso ekunikeza ukunambitheka kweqiniso kwaseWest Texas. Indlu yokugezela inkulu futhi ihlotshiswe kahle ngethayela laseMexico, umnyango wakudala kanye nebhentshi lokugqoka. Igumbi lokugezela linohambo olubanzi eshaweni, kodwa ubhavu wokugeza awufakiwe.
I-Casita yethu isendaweni ethule, yomndeni eyakhiwe phezulu komhosha eCanyon Country Club. Ngalesi sizathu, sicela ukuthi ugcine izinga lomsindo liphansi, ikakhulukazi ngemva kuka-10 p.m. Indawo yethu inenkundla yegalofu eyi-9 hole eyimfihlo, wamukelekile ukuyibhukha isikhathi se-tee. Sinenqola yegalofu ozoyisebenzisa uma ungathanda ukwehla umqansa uye esitolo sochwepheshe. I-canyon iyikhaya lezilwane eziningi zasendle ezihlanganisa izinyamazane, i-turkey, izikhova nokunye okuningi. Sikumizuzu emi-5 ukusuka e-West Texas A&M University (futhi wamukelekile umndeni wabafundi), kanye ne-Panhandle Plains Historical Museum (enkulu kunazo zonke e-Texas). I-Palo Duro Canyon iwumhosha wesibili ngobukhulu e-United States futhi inemizila eminingi yokuqwala izintaba neyokuhamba ngebhayisikili yezintaba zomuntu othanda ngaphandle, futhi iwuhambo olusheshayo lwemizuzu engama-20 ukusuka endaweni yethu. Umculo, i-TEXAS, nawo usePalo Duro Canyon futhi uqala ngoJuni kuya ku-Agasti. Isikwele esiseCanyon sikude nje ngemizuzu futhi sinezindawo zokudlela eziningi ezinhle njenge, Sayakomarn's, The Imperial Taproom, Joe Taco, Barrel and Pie, Recreation, kanye neRockin' Zebra Soda Shoppe. Futhi siyimizuzu engama-20 ukusuka e-Amarillo enezindawo eziningi zokudlela eziningi njengeBig Texan eyaziwa kakhulu, kanye nemisebenzi efana ne-Amarillo Art Museum, iSymphony, ne-Ballet, iRoute 66 yomlando, i-American Quarter Horse Hall of Fame & Museum, Wonderland, Cadillac I-Ranch neqembu le-baseball elisha le-SodPoodles AAA.
Sinenkundla yokudlala yezingane ezingayidlala egadwa abazali, kanye nebhayisikili eliyi-tandem uma iceliwe. Uzokwamukelwa ngokudla okulula neziphuzo ezimbalwa, kodwa futhi nayi-retriever yethu yegolide, uSadie. Uthanda izivakashi! Sifuna ukuthi ujabulele isikhathi sakho lapha, uthwebule ukushona nokuphuma kwelanga, uphumule futhi uchithe isikhathi esithile ku-Panhandle.
4.97 · 177 okushiwo abanye
Indawo yangakithi icishe ibe sengathi usezweni kodwa sinomakhelwane. I-canyon yinhle ukuhambahamba futhi udlale igalofu kuyo. Indawo enhle yokujabulela isibhakabhaka esikhulu esivulekile nokushona kwelanga.
Sikhona uma udinga noma yini kodwa sizokunikeza ubumfihlo bakho.
Siyakuthanda ukuhlangana nabantu futhi singakujabulela ukukunikeza iziphakamiso zokuthi wenzeni noma ungadla kuphi uma ubuzwa.